Cusboonaysiinta amniga OS X, iibinta AirPods, xarunta horumarinta Shenzen iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican waxaan ka imid Mac | Waxaan ka imid mac
Cusbooneysiinta amniga OS X, iibinta AirPods, xarunta horumarinta Shenzen iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Jordi Gimenez | | Noticias, Alaabada Apple
Toddobaadkan wuxuu noqon doonaa toddobaad kale oo si la yaab leh aannaan u helin noocyada beta ee nidaamyada hawlgalka Apple ee kala duwan, laakiin waxaan aragnay imaanshaha mid cusboonaysiinta amniga Dheeraad u ah adeegsadayaasha OS X 10.11.6 ee hagaajiya arrinta kernel. Si kastaba xaalku ha ahaadee usbuuc aan wax badan buuq lahayn marka ay timaado Mac laakiin taasi waa wax sidoo kale caado u ah bisha Janaayo shirkadda Cupertino.
Si aad u bilowdo dib -u -eegista toddobaadlaha ah ee Axadda, waxaan kaa rabnaa inaad ku haysato dhammaan sawirrada maktabadda sawirradaada si habsami leh sidaa darteed waxaan kaaga tagnay casharro yar abaabulo sawirrada Mac -gayada iyaga oo maraya goobtooda.
Toddobaadkan waxaa sidoo kale laga hadlay iibinta Apple AirPods -ka cusub. Taleefan -gacmeedyadan ugu horreeya ee ka yimid astaanta tufaaxa qaniinsan ayaa weli leh waqtiyada dhalmada oo ah 6 toddobaad illaa maanta, waxayna umuuqataa sidaas si fiican uma iibin lahaayeen sida wax walba u muuqdeen inay tilmaamayaan. 31 -ka Janaayo ee soo socota waxaan ka bixi karnaa shaki haddii Apple go'aansato inuu muujiyo tirooyinka iibka dhabta ah.
Warka soo socda ayaa sidoo kale la xiriira iibinta Apple laakiin markan kuwa loo malaynayo inay leeyihiin MacBooks iyo MacBook Pros oo leh Bar Bar. Imaanshaha soo -saareyaasha cusub iyo heerka iibka wanaagsan ee Macs u muuqdaan inay leeyihiin in kasta oo hoos -u -dhac guud ku yimid iibinta marka laga hadlayo kombiyuutarrada, waxay u augur sanad wanaagsan.
Ugu dambayntii waxaannu idinka tagaynaa warar toddobaadkan lagu baahiyay warbaahinta kala duwan oo ka hadlaysa suurtogalnimada in Foxconn ay ka dhisato xarun R&D Shenzen, China, waayo, abuur oo la shaqee tusaalooyinka ee alaabta cusub ee Apple. Cadaadiska ah in aan wax soo saarkeeda loo qaadin Maraykanka iyo xiisaha astaanta lafteeda si ay uga sii samaysato Aasiya, ayaa fure u noqon doonta mashruucan la xanto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Cusbooneysiinta amniga OS X, iibinta AirPods, xarunta horumarinta Shenzen iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Apple vs Qualcomm (qaybta 2): jawaabta Qualcomm
Apple vs Qualcomm: cabashooyinka tartanka aan caddaaladda ahayn